Kaningi kunezimo lapho nomzimba angaphandle ingena iso. Lokhu kungaba eyelashes, izinambuzane ezincane ezinamaphiko, uthuli. Okuningi akuvamile okwengeziwe kungase kube izinto ezihambisana nomuntu, njengensimbi noma ukhuni shavings imisebenzi. Ukuthola nomzimba angaphandle esweni, kuye ngesimo ngasinye sazo, bangase uyingozi noma cha. Uma usizo lokuqala abanye uyophathwa ngokungalungile, izinkinga ezincane ezingenza abe nesimo esingathi sína.
Izizathu ukuthola nomzimba angaphandle
Isimo, ngenxa okuyinto izinhlaka emehlweni ungathola izakhi kwamanye amazwe, zihlukile. Uma ukhona umzimba angaphandle iso, izizathu lokhu kungafaka lokhu okulandelayo:
Ukwehluleka ukubona inhlanzeko yomuntu siqu. Kulokhu, izakhi ehlukahlukene ingena ezinhlwini ikakhulukazi ku emehlweni abantwana abancane, okwathi ngemva ezitaladini kungukuthi izandla zabo futhi baqala ukuba uwuhlikihle ubuso babo. Izitho obonayo uthola lowo doti kwencani, zesihlabathi, uthuli.
yokulimala okuhlobene nomsebenzi. Kuphakama ngokuvamile Lapho abantu besebenzela emkhakheni wezezimboni, lapho imishini ziphathwa noma ukhuni. Flying off izinhlayiya zingashintsha trajectory yayo futhi bayasilela ngesivinini esweni, engena shí ke, okuholela kungadaleka ingozi embi kakhulu.
Umoya. Kulokhu, lo vortices liphuma kusuka uthuli phansi, sawdust nezinye izinhlayiya emihle ukuthi angangena umuntu.
Contact lens. Uma aphathwa kahle, khona-ke ayikho ingozi kumuntu, ngeke abangele. Kodwa ngezandla ezingcolile umzimba ngokuvamile akwelinye izwe angena iso.
izingubo kusengutsheni yoboya. Uma ukugqoka ijezi phezu kwekhanda lakhe loboya, eyelashes yizinwele ezincane kakhulu ukuthi ngemva kwesikhashana buthule awela emehlweni.
Ukuthola izimpawu nomzimba angaphandle esweni
Foreign umzimba ukuzwa esweni lingase libonakale ukungakhululeki okuncane nobuhlungu babulawa. It kuxhomeke endleleni zonakala isitho obonayo, nendawo into angaphandle.
Ngokuvamile ezitholakala iso nomzimba angaphandle okubangela ubuhlungu nokuhlukumezeka. Kungase kube edwengula, ububomvu, evutha, ngopha izitsha ebusweni, kukhuphuke ukuzwela ekukhanyeni, elithambile izicubu ukuvuvukala, umbono iqala ukufiphaza.
Kakhulu akuvamile nabo amancane abukhali ndaba angaphandle ngaphakathi kwamehlo bengekho nhlobo noma zincane kakhulu izimpawu umonakalo. Umuntu akakwazi ukuphazamisa lutho, kodwa uma kukhona izinsolo nomzimba angaphandle esweni, kufanele ngokushesha uthintane kudokotela wezifo zamehlo.
Iyini ingozi ukuwela iso into angaphandle?
izakhi Foreign emzimbeni enobuthi noma imbangela yona umonakalo mechanical ukusabela ukuvuvukala (blepharitis, keratitis, conjunctivitis, uveitis), ukopha kanye nezinkinga yesibili.
It is ukuthola umzimba angaphandle ibhekwa njengeBhayibheli nephephile sac conjunctival. Uma le ndaba abukhali, kulula ukungena cornea noma sclera. Futhi uma wandizisa ngesivinini, basuke ezilimele.
Uma etholakala iso angaphandle umzimba yensimbi noma ithusi, ngokuvamile kwenzeka enkingeni ezifana metallosis emelela ukusabela ikhemikhali izicubu iso. ingozi yayo itholakala iqiniso ukuthi acuity ezibukwayo iqala ukulahla, twilight nobumpumputhe zenzeka, unciphise emkhakheni buka, zikhona ezinye izimpawu. Uma into angaphandle ungaphakathi iso isikhathi eside, kungase kubangele eziyingozi kakhulu.
Kanjani ukunikeza usizo lokuqala?
Uma ukhona umzimba angaphandle iso, usizo lokuqala kufanele kuhlinzekwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kuyadingeka ukuba sihlole isitho obonayo, ngezinye izikhathi oqeda leso elingenhla futhi bephonsa aphansi. Kwezinye izimo zokukhwabanisa enjalo kwanele ukususa into kuzibamba.
Indlela ukuyikhipha esweni nomzimba angaphandle? Uma kutholwa kubalulekile ukunquma, kunzima noma soft. Uma into ethambile, ungazama ukuyisusa. Musa ukulihambisa kobuso iso futhi akufanele xhoxha isikhungo salo futhi kudingeka kwenziwe kusuka ichopho iduku iphuzu ehlanzekile zama ubambe kubo kuyizinhlayiyana ngakho ukuthi ithobela ke, ngemva kwalokho-ke isuswe.
Uma into ayikwazi ukususwa, kwenqatshelwe ukuba uwuhlikihle emehlweni, kungenjalo nomzimba angaphandle kuphela kakhulu ukungena ke, okungaholela ekulimaleni eyengeziwe. Abukhali isisulu kufanele igcinwe isikhundla avaliwe eside ngangokunokwenzeka, ngakho njengoba eshaywa bakwazi ukuthuthukisa ingqondo.
Ngemva kwalokho, ibhandishi iso ukuze akusho ucindezela yeso, futhi ufune usizo lwabezokwelapha.
Uma isiguli ekhononda of angaphandle umzimba ukuzwa esweni, kubalulekile lokwenza ukuxilongwa. Ucwaningo kuyinto ukusebenzisa isivivinyo umbono futhi ukulungisa izinqubo iso ulwelwesi ephethe ilambu ekhethekile.
Futhi, kungenzeka kudivayisi ultrasound esetshenziselwa ukuhlolwa, esimweni futhi ophthalmoscope iso.
Ukususwa kwezimiso nomzimba angaphandle esibhedlela
Uma kuphela akakwazi ukudonsa into bezinye izizwe abavela emaqenjini amehlo noma buyingozi nempilo yabantu, kubalulekile ukuba ngokushesha ukuletha isisulu esibhedlela bezokwelapha abanekhono. Ezimweni eziyinkimbinkimbi ezidinga ukusetshenziswa udokotela ohlinzayo amehlo.
Ukususwa kwezimiso umzimba bezinye izizwe abavela emaqenjini udokotela wamehlo usebenzisa swab ezimanzi lapho wets isinqandakuvunda, noma isebenza siwasebenzise jet isixazululo ekhethekile. Lezi zokukhwabanisa wenziwa esimweni lapho ucezu kwaphazamiseka ezisebusweni bawo iso.
Uma hizinisi ngesinyenyela kuya conjunctiva, kususwe Kwenziwa nokusetshenziswa isixazululo izinzwa, kusukela le nqubo kubuhlungu ngempela. udokotela Okokuqala Ukuvubukula angena ikhambi iso, futhi ngemva kokuba iqalile ukusebenza, usebenzisa udlawana noma inalidi kususa into angaphandle. Ngemva amehlo akhe bahlambela kuwo akhiphe kanye zamabhodlela laying sodium sulfatsil. Ngokuvamile, ngemva nokuqedwa angaphandle kuyizinhlayiyana ukuvuvukala ke kuyashesha kakhulu, kodwa ngezinye izikhathi isiguli kungenzeka uzizwa ukungakhululeki kancane. Ngokuvamile lokhu kungenxa microtrauma we conjunctiva.
Ngezinye izikhathi nomzimba angaphandle Ungafaka cornea. Kulokhu, Ucezwana amanga ekujuleni iso, njengoba ngesinyenyela ngomfutho omkhulu. Kungaba ukhuni izingcezwana eziyizinsalela, metal shavings, ingilazi. Esikhathini esithile ngemva Ukungena izinhlayiya kwenzeka emhlabeni kokuziphatha ngaphandle. Uma isikhathi Akayisusi Ucezwana, kwakheka pretty ngokushesha emhlabeni ithumba. Ukuze uqinisekise uphethwe olwenziwa biomicroscopy futhi transillumination. Khona-ke, emehlweni safaka izinzwa basusa into angaphandle ithuluzi ekhethekile. Ngemva kwalokho, isidumbu ibhandishi futhi linqume Yiqiniso kwama-antibiotic.
emizimbeni Foreign kule ingaphakathi Neso imbala iwe akuvamile. Kulokhu, into angaphandle lingena choroid noma Vitreous. Lokhu kungaholela iridocyclitis, opacities Vitreous, futhi ukonakala futhi lamabutho ngwengwzi. Uma into angaphandle is hit in the iso ngebutho elikhulu, kungenza kokulimala wayichoboza.
Izinyathelo ukuze ugweme ukuxhumana ngamehlo, izinhlayiya angaphandle ku siqu iziqondiso inhlanzeko nokuphepha emsebenzini. Uma umsebenzi ixhunyiwe nomsebenzi we umshini, qiniseka ukugqoka amagogolo zokuzivikela. Izingane ezincane zidinga ebhekiwe nangaphezulu Kunconywa ukucacisa imithetho inhlanzeko yomuntu siqu.
Ngakho, uma usola ukuthi umzimba angaphandle iso, ungazama ayibulale ngokwakho. Kodwa kufanele kwenziwe kuphela uma igunya hhayi yokulinyazwa. Uma sagibela indiza, ezifana-steel wool, udinga ukuthatha ngosizo kudokotela wezifo zamehlo, kungenjalo kungaba khona eziyingozi.
Iguliswa utshwala - uyinganekwane yini noma zingenzeka ngempela?
Ingabe siphila ngempela ezweni elibonakalayo?
Outerwear usayizi Ithebula zabesifazane: Russia, e-USA, i-Italy, China